PSJTV | चन्द्रमा नभए पृथ्वीमा दिन-रात १२ घन्टा मात्र
चन्द्रमा नभए पृथ्वीमा दिन-रात १२ घन्टा मात्र
लन्डन: यो तपाई हामी सबैलाई थाहा छ कि चन्द्रमा पृथ्वीको एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह हो । यो आफै चम्कदैन । यसका लागि सूर्यको प्रकासको आवश्यकता पर्छ । चन्द्रमामा हाल सम्म १२ मानिसले पाइला टेकिसकेका छन् । तर तपाईलाई थाहा छ कि चन्द्रमा भएन भने के हुन्छ रु आउनुहोस हामी बताउछौ चन्द्रमा नभए पृथ्वीमा के हुन्छ ?
यदी चन्द्रमा भएन भने पृथ्वीमा दिन-रात २४ घन्टाको सट्टा केबल १२ घन्टाको मात्रै हुन्छ । एक वर्षमा ३६५ दिन होइनकि १००० देखि १ हजार ४०० को आसपासमा दिन हुन्छ ।
रातमा हलुका उज्यालो पनि चन्द्रमाकै कारण हुने गर्छ । तर जब चन्द्रमानै भएन भने प्रकाश पनि हुदैन । सबैतिर अध्यारो मात्रै हुन्छ । यो खबर आजको कारोबार दैनिकले लेखेको छ ।
मोबाइल अफ गरेर १ महिनादेखि कहाँ हराइन् स्वास्थ्य सचिव?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई थप उपचारका लागि विदेश लैजाने तयारी भएको छ। एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रियापछि अस्पतामै रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको चिकित्सकले बताएका छन्। डिस्टार्ज गरेपछि मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अमेरिका लैजाने चिकित्सक ...
८ मंसिर, एजेन्सी । हङकङमा भइरहेको सरकारविरोधी प्रदर्शनका क्रममा एक १२ वर्षीय बालक पनि दोषी ठहर भएका छन्। उनी हङकङ आन्दोलनका क्रममा सरकारले दोषी ठहर गरेको अहिलेसम्मकै कान्छा प्रदर्शनकारी हुन्। नाम सार्वजनिक ...